ch 11 မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 11 မဿဲ
11:1 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, ယရှေုကမိမိတဆယ်နှစ်လုံးကိုတပည့်ညွှန်ကြားချက်ပြီးစီးပြီးမှ, သူသင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကွာထိုအရပ်မှ သွား. သူတို့မြို့များအတွက်ဟောပြောဖို့.
11:2 အခုတော့ဆရာယောဟနျကြားလျှင်, ထောင်ထဲမှာ, ခရစ်တော်၏အကျင့်ကိုကျင့်အကြောင်းကို, တပညျ့နှစျပေးပို့ခြင်း, သူ့ကိုအားဆို၏,
11:3 "သင်လာရန်ဖြစ်ပါသည်တော်မူသောသူဖြစ်ကြသည်, သို့မဟုတျအခွားမျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်?"
11:4 ထိုအခါယရှေု, ကိုတုံ့ပြန်, ထိုသူတို့အားပြောဆို: "သင်ကြားမြင်ကြပြီဘာကို Go နှင့်ယောဟန်အားသတင်းပို့.
11:5 မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်မြင်, ခြေဆွံ့လမ်းလျှောက်, အနူရောဂါသည်များကိုစင်ကြယ်စေတတ်, နားပင်းသောသူတို့သည်ကြား, နောက်တဖန်သေခြင်းမှထမြောက်, ဆင်းရဲသောသူကို evangelized နေကြတယ်.
11:6 ထိုအမင်္ဂလာရှိ၏ငါ့ကိုအဘယ်သူမျှမပြစ်မှုကိုတွေ့သောသူဖြစ်၏။ "
11:7 ထိုအခါ, သူတို့သည်ထွက်သွားအပြီး, ယရှေုသညျယောဟနျသအကြောင်းကိုလူအစုအဝေးမှပြောဆိုရန်စတင်: "သင်ကြည့်ရှုရန်သဲကန္တာရအဘယျသို့ထွက် သွား. ခဲ့ပါ? တစ်ဦးကကျူပင်ကိုလေဖြင့်တုန်လှုပ်?
11:8 ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်သောအရာကိုအထဲကကိုသွားခဲ့ပါဘူး? ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်ကိုတစ်ဦးကလူကို? အကယ်, ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်ကိုဝတ်ကြ၏တဲ့သူတွေကိုရှငျဘုရငျတို့၏အိမ်များတွင်များမှာ.
11:9 ထိုအခါသင်တို့ကိုတွေ့မြင်သောအရာကိုအထဲကကိုသွားခဲ့ပါဘူး? ပရောဖကျကို? ဟုတ်ကဲ့, မင်းကိုပြောမယ်, ပရောဖကျတထက်နှင့်ပိုပြီး.
11:10 ဤသူသည်အ, ကျမ်းစာလာသည်ကားအဘယ်သူကို၏: '' ကြှနျုပျသညျ, ငါသည်သင်တို့၏မျက်နှာရှေ့မှာငါ၏အအိန်ဂျယ်ပေးပို့, အဘယ်သူသည်သင်တို့ရှေ့မှာ, သင့်ရဲ့သွားရာလမ်းကိုပြင်ရလိမ့်မည်။ ''
11:11 အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, မိန်းမမွေးသောသူတို့တွင်အ, နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ထက် သာ. ကြီးမြတ်တယောက်မျှမရှိပျေါထှနျးထားပါတယ်. သို့သျောလညျးကောင်းကင်ဘုံ၏နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးထိုသူထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်.
11:12 သို့သော်ယောဟန်၏လက်ထက် မှစ. ဗတ္တိဇံဆရာ, ယခုတိုင်အောင်, ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်အကြမ်းဖက်မှုများကြံ့ကြံ့ခံထားပါတယ်, နှင့်အကြမ်းဖက်ဝေးကသယ်ဆောင်.
11:13 လူအပေါင်းတို့သည်ပရောဖက်တို့သည်ပရောဖက်ပြုပညတ်တရားသည်, ပင်ယောဟန်မရောက်မှီတိုင်အောင်.
11:14 တဖန်သင်တို့ကလကျခံဖို့လိုလိုလားလားရှိပါလျှင်, သူသည်ဧလိယကိုဖြစ်ပါတယ်, သူကိုလာရန်ဖြစ်ပါသည်.
11:15 နားထောငျနားကိုသူမည်သည်ကား, ကြားပါစေ.
11:16 သို့သော်လည်းငါသည်ဤလူမြိုးကိုနှိုငျးယှဉျရကြလိမ့်မည်သည့်အရာကို? ဒါဟာဈေး၌ထိုင်လျက်ကလေးငယ်များကဲ့သို့ဖြစ်၏,
11:17 အဘယ်သူသည်, သူတို့၏အပေါငျးမှထွက်ပေးဖို့တောင်းဆို, ပွောဆို: '' ကျနော်တို့သင်တို့အဘို့အဂီတတီးခတ်, သငျတို့ကခုန်ခဲ့ပါဘူး. ကျနော်တို့မြည်တမ်း, သငျတို့သညျညညျးတှားမပြုခဲ့ပေ။ ''
11:18 ယောဟန်သည်မစားမသောက်ဘဲလာ; နှင့်သူတို့ပြော, '' သူသည်နတ်ဆိုးစွဲရှိပါတယ်။ ''
11:19 လူသားသည်စားသောက် လာ. ,; နှင့်သူတို့ပြော, '' ကြှနျုပျသညျ, voraciously စားသောက်သောသူနှင့်စပျစ်ရည်ကိုသောက်သောသူသည်သူတစ်ဦးသည်လူ, တစ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်ဆိုးသောမိတျဆှေ။ '' သို့သော်ဉာဏ်ပညာကိုသူမ၏သားအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်၏။ "
11:20 ထိုအခါသူသည်မိမိအအံ့ဖှယျမြားမြားပွီးမွောကျခဲ့ကြသည့်အတွက်မြို့ရွာတို့ကိုဆုံးမမှစတင်ခဲ့သည်, သူတို့နေဆဲနောင်တမရဖူးအဘို့.
11:21 သငျသညျဖို့ "မင်္ဂလာရှိ၏, Chorazin! သငျသညျမှမင်္ဂလာရှိ၏, ဗက်ဇဲဒ! သင်၌ပြုသောအမှုခဲ့ကြသောနိမိတျလက်ခဏာတုရုမြို့နှင့်ဇိဒုန်မြို့၌ပြုကြခဲ့လျှင်, သူတို့ haircloth နှင့်ပြာ၌ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့နောင်တရကြလိမ့်မည်.
11:22 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, တုရုမြို့နှင့်ဇိဒုန်မြို့သငျသညျထကျပိုအပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူမည်, တရားသဖြင့်စီရင်သောနေ့၌.
11:23 ပြီးတော့သင်, ကပေရနောင်, သငျသညျကောငျးကငျဘုံမှအပေါငျးတို့သညျခြီးမွှောကျလမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း? သငျသညျငရဲမှအပေါင်းတို့သည်လမ်းဆင်းရကြလိမ့်မည်. သင်၌ပြုသောအမှုခဲ့ကြသောအံ့ဖှယျသောဒုံမြို့၌ပြုကြခဲ့လျှင်, ဖြစ်ကောင်းကြောင့်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပေသည်, ပင်ယနေ့တိုင်အောင်.
11:24 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, သောဒုံမြို့၏ပြည်ကိုသင်တို့ထက်ပိုပြီးအပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူမည်ကြောင်း, တရားသဖြင့်စီရင်သောနေ့၌။ "
11:25 ထိုအချိန်မှာ, ယရှေုသညျတုန့်ပြန်ဟု: "ငါသည်သင်တို့ကိုအသိအမှတျပွု, ခမညျးတျော, ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး၏သခင်, သင်ပညာနှင့်သတိရှိသောဤအရာတို့ကိုဝှက်ထားလျက်နေသောကြောင့်, နှင့်သူငယ်များမှသူတို့ကိုထင်ရှားပါပြီ.
11:26 ဟုတ်ကဲ့, ခမညျးတျော, ဒီအတှကျအသငျသညျရှေ့တျော၌နှစ်သက်ခဲ့.
11:27 ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါ့ခမည်းတော်သည်ငါ့အားအပျတျောမူပွီ. အဘယ်သူမျှမညျးတျောသညျ မှလွဲ. သားတော်ကိုသိတယ်, မဟုတ်သလိုမည်သူမဆိုသားတော်ကို မှလွဲ. ခမညျးတျောကိုသိပါဘူး, နှင့်သားတော်ကိုသူ့ကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့ဆန္ဒရှိသူတွေကိုဘယ်သူကိုမှ.
11:28 ကျွန်တော့်ဆီလာပါ, သောသူအပေါငျးအလုပ်သမားနှင့်ထမ်းခဲ့ကြ, သင်တို့ကိုငါလန်းဆန်းစေမည်.
11:29 သငျသညျအပေါ်သို့ငါ့ထမ်းဘိုးကို ယူ. အ, ငါ့ကိုထံမှသင်ယူ, ငါနှိမ့်ချခြင်းနှင့်စိတ်နှလုံး၏နှိမ့်ချဖြစ်၏; နှင့်သင်သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်အဘို့ငြိမ်ဝပ်စွာနေရကြလိမ့်မည်ရှာတွေ့.
11:30 ငါ၏အထမ်းဘိုးသည်ထမ်းချိုမြိန်သည်နှင့်ငါ့ဝန်လည်းအလင်းဖြစ်၏။ "